Xildhibaannada Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya oo looga Digay Khilaaf soo Dhex-gala |
Xildhibaannada Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya oo looga Digay Khilaaf soo Dhex-gala
buy sildenafil online, order zithromax. Qaar ka mid ah Siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa walaac ka muujiyay mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha Soomaaliya, kaasoo ay u arkeen mid keenaya khilaaf soo dhexgala xildihbaannada baarlamaanka Somalia.
Siyaasiyiintan Soomaaliyeed ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay kala aragti-duwanaanshahaan soo dhexgalay Golaha Baarlamaanka Somalia iyo sidoo kale mooshinnada is-barba-socda.
Mooshinka ka yaalla Madaxweynaha ayuu sheegay in loo baahan yahay in loo maro qaab sharci ah, islamarkaana aan la carqaladeyn hanaanka la hiigsanayo ee Sanadkan 2016-ka.
Sidoo kale, siyaasiyiintan ayaa sheegay in Xildhibaannada Baarlamaanka uu waajib ka saaran yahay dalkooda iyo dadka ay matalaan, ayna yihiin Sharci-dajintii dalka; sidaa darteedna aysan muran iyo is-qabsi ka keenin mooshinka yaalla baarlamaanka.
“Cid walba oo khalad lagu tuhmo in lala xisaabtamo waa waajib, xildhibaannadana waxaa looga baahan yahay inay mooshin walba oo la hor-keeni ay sharciga mariyaan oo uusan muran soo dhex-gelin,” ayay xubnahan siyaasiyiinta ah ku yiraahdeen warbixintooda.
Ugu dambeyn, Digniinta Siyaasiyiintan ee ku aaddan in xildhibaannada Golaha Shacabka ay ka digtoonaadaan khilaaf soo dhex-gala ayaa wuxuu imaanayaa xilli ay baarlamaanka horyaallaan laba mooshin oo iska soo horjeeda.